China kuCzech-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Kutakurwa Kunorema Kwekutakura zvinhu
YeTransit Line Kuongorora
Kusimudza & Kuisa
Anorema Kutakura Zvitima Kutakura
China European Mugwagwa Wekutakura
China Kuenda kuCentral AsiaI International Road Transport
Russia International Mugwagwa Wekutakura
Mongolia International Mugwagwa Wekutakura
Nepal Mugwagwa Wekutakura
Asean Mugwagwa Wekutakura
Pakistan Mugwagwa Wekutakura
RORO & Gura Bhurosi
Anorema Cargo Mhepo Charter
China kuenda kuJapan
China ku Philippines
China kune Malaysia
China kune Singapore
Central Asia Mutsara
China ku Uzbekistan
China kuenda kuNepal
India Pakistan Mutsetse
China kuenda kuBanglandi
China kuenda kuSri Lanka
Middle East Mutsara
China kuUnited Arab Emirates
China kuenda kuSyria
China kusvika kuJodhani
China ku Egypt
China ku Saudi Arabia
China ku Bahrain
China ku Kuwait
China ku Yemen
Europe yeMediterranean uye Makungwa Matema
China kuenda kuSweden
China kuenda kuGerman
China kuUnited Kingdom
China kuenda kuNetherlands
China kuenda kuBelgium
China kune Girisi
China kuenda kuSpain
China ku Libya
China kuenda kuTunisia
China kuenda kuMorocco
China ku Djibouti
China kuenda kuSierra Leone
China kuenda kuLiberia
China ku South Africa
Australia neNew Zealand Line
China kuenda kuNew Zealand
China kuPapua New Guinea
China kune Solomon Islands
North America Iine
China kuUnited States
China ku Mexico
Maodzanyemba America Line
Heavy Cargo Kufambisa & Heavy Kutakura
International Door kune Door
Kunze-Kwa-Gauge Kutakura Zvitima
Mhepo / Ocean Kufambisa
Yakasarudzika Railway Exerss
Metallurgy Chemical Indasitiri
Majini Okuvaka Maindasitiri
Kuvaka Maindasitiri Okugadzira
Vehicle Kugadzira Indasitiri
Mhepo Simba Midziyo
Zvokufambisa Zvekufambisa Zvigadzirwa Kugadzira Indasitiri
Electric Power Maindasitiri
Zvivakwa Zvekuvaka Zvivakwa zveimba
Imba>Mutsetse Webasa>Europe yeMediterranean uye Makungwa Matema>China kuCzech
Europe yeMediterranean uye gungwa dema
North America Mutsetse
Kutumira kubva kuChina kuenda kuCzech
Kana iwe uchitsvaga wekuvimbika wekutakura zvinhu kuti ubatsire kutumira kwako kubva kuChina kuenda kuCzech, uri munzvimbo chaiyo.
Kunyangwe iyo sevhisi yekutakura kubva kuChina kuenda kuCzech yakura kwazvo mazuva ano, SHL inogona kugara ichiedza kuita logistics kushanda zvirinani, kunze kwekugadzirisa mhinduro uye basa rakanaka, isu zvakare tinogona kupa kukwikwidzana mitengo kubva kuChina kuenda kuCzech.
SHL ichabatsira yako kusarudza yakanakisa nzira yekutakura, yemakwikwi yekutumira mutengo uye akanakisa ekutumira makambani kuti ubatsire kupinza kwako kubva kuChina kuenda kuCzech.
China European Mugwagwa Yekutakura kubva kuChina kuenda kuCzech
Chechina logistics chiteshi pakati peChina neEurope mushure memhepo, gungwa uye njanji yekufambisa Iri mhiri kwekondinendi yeEurasia kuburikidza neChina horgos chiteshi, Kupfuura Kazakhstan, Russia, Belarus nePoland kuenda kuCzech, nzvimbo yepakati peEurope.
China Railway Express kubva kuChina kuenda kuCzech
SHL inopa yakatsiga njanji sevhisi pakati peChina neCzech yeCFCL neLCL zvinhu zvekutakura, Imwe Bhandi uye Imwe Road projekiti yekugadziriswa kwemahara uye kunze kwenyika mhinduro dzakagadziriswa uye tinogona kugadzirisa matambudziko ekuregedza tsika muChina.
Kutakura Kwemhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuCzech
Kune akawanda akakosha enhandare dzendege muCzech uye kune zvakare zvakawanda zvekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuCzech nendege, SHL inogona kupa yakakwikwidza kwazvo kutakura zvinhu zvemhepo zvakaderera kupfuura musika kumutengi wedu zvichibva pane yako yekuda nguva.
Ro-Ro / Break Bulk Kutakura kubva kuChina kuenda kuCzech
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yezvakanaka michina, mota nemidziyo inorema kubva kuChina kuenda kuCzech Tinogona kupa imwechete yekumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kutakura Gungwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuCzech
SHL ine yakagadzika huwandu hwekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuFelixstowe, Southampton, nezvimwewo. Kuti isu tigare tichiwana yakanaka gungwa mitoro kuCzech chiteshi kubva kune vakawanda vatakuri, uye tinogona kuona nzvimbo yemidziyo kunyangwe mumwaka wepamusoro.
Pasuwo neSuo Sevhisi China kuCzech
Kune basa repasuo nesuo, SHL inogona kuita mvumo yekutsika netsika muCzech uye kuendesa zvinhu zvekutumira kune yedu vatengi imba yekuchengetera zvakanaka, Kunze kweizvi, kana iwe uri wega, SHL ine kambani yekutengeserana inogona kuve mubati pane BL uye ikubatsire kupinza izvo zvaatumirwa nhumbi zvinobudirira.
China ingangoita 7,775 km kubva kuCzech asi kuyambuka chinhambwe ichi kunogona kutora nguva yakareba nekuda kwenzira dzegungwa dzinotsanangurwa nemitumbi yemvura.
Kutakura kwegungwa kunoenderana nenzvimbo yemachiteshi kuti ishandiswe uye nemhando yekutumira zvinhu kuti itakurwe.
Kunyanyisa kutakura zvinhu kunowanzoendeswa kuburikidza negungwa.
Kunyangwe zvichitora nguva kuti usvike kwekupedzisira kuenda, zvakaratidza kuve zvakachipa kupfuura zvese.
Asati asarudza iyi nzira yekutumira, iye / iye anofanirwa kunge achizivana nezviteshi zvakasiyana zvese muChina neCzech.
Makepe emakungwa muChina
Taizhou (Maodzanyemba eWenzhou) Wenzhou change Quanzhou
Yingkou Jinzhou Taizhou (Maodzanyemba eWenzhou) Qinhuangdao
Ongorora: Iwe unofanirwa kutumira zvinhu zvako kuchiteshi chegungwa chakanakira chinokutendera kuti utore nyore kubva kuChina kuenda kuUK
Main Airports muChina
Shenzhen Bao'an International Airport Xiamen Gaoqi International Airport
Main Ndege muCzech
Maitiro Ekutumira kubva kuChina kuenda kuCzech
Pese paunenge uchiunza kubva kuChina kuenda kuCzech, unogona kusarudza nzira zhinji dzekutakura.
Mamiriro ekutumira anoenderana ne:
2. Type nemhando yezvinhu
3. Mukana unowanikwa, kureva volumetric chimiro chakakosha mumakungwa ekutakura zvinhu
4. Kunyangwe iwe urikuenda kunofamba nengarava kana kuti kune mhepo
Saka ndedzipi sarudzo dzaunofanira kufunga nezvadzo?
Roll-on / Kukanda-kubvisa kutumira
BREAK BULK Kutumira
Yese Yakakwana Mutoro (FCL) Kutumira
Zvishoma pane Container Load (LCL) Shipping
Kunze kweGauge (OOG) Kuendesa.
Yakazara YeMarori Mitoro (FTL) Freight Service
Zvishoma ZveMarori Mitoro (LTL) Freight Service
Ndeipi chiteshi chandinofanira kushandisa kutumira kubva kuChina kuenda kuCzech?
Kune madoko mazhinji kwazvo muChina uye ndakaratidza mazhinji awo mugwaro iri.
Nekudaro, sekutonga kwemunwe, shandisa imwe iri pedyo nemutengesi wako.
Iwe unofanirwa kukurukura izvi neyavo yekutakura zvinhu.
Nekuti iwe unoda chiteshi chinogona kukusanganisa iwe zvakananga kuCzech
Nenzira iyi, iwe uchachengetedza nguva nemari.
Ndeipi yakazara nguva inotorwa kutakura kubva kuChina kuenda kuCzech?
Kazhinji, nguva yekufambisa ichasiyana zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka.
Iwe unogona kuziva nguva yenguva zvichienderana nenguva yekufambisa uye dzimwe nzira dzekuita zvinhu.
Mapepa uye kubata maoko anogona kutora vhiki mbiri.
Kuendesa kunogona kusiyanisa kubva maawa mashoma kusvika pamazuva akati wandei zvichienderana nemaficha ekutumira.
Kurapa chigadzirwa kubva kumutengesi chinogona kutora mazuva mashoma kana mwedzi.
Muchidimbu, iwe unogona kukoshesa mune zvese izvi kuti uwane nguva yese yekutora ichatora kubva kuChina kuenda kuCzech
Tinorevei ne "Beat My Freight Quote" kana tichiendesa kunze?
Kurova My Freight Quote ndipo paunobata zvakananga nehunyanzvi kutakudza zvinhu zvinotakura zvine ruzivo rwakanaka munharaunda mako.
Zvese zvabvunzwa zvinozogadziriswa nemumiririri wepanzvimbo uyo achakutsvaga kwakanaka chibvumirano panzvimbo yako.
Saka, zvese zvibvumirano zvichave zviri pakati pemumiririri uye iwe pachako.
MuBeat Yangu Freight Quote, hapana komisheni inotorwa chero yekutengeserana kunoitwa uye unogona kuchengetedza yakawanda.
Kuti uve unobvumidzwa kubvumidzwa Beat Yangu Freight Quote Freight, mutengesi wekutakura zvinhu anofanira kunge ari nhengo yesangano rekutakura zvinhu rinotakura nyika.
Zvakare, iyo inotakura zvinhu mberi inofanirwa kuratidza yakakwira yehunyanzvi.
Muzhinji, ivo vanotenderwa nenhengo dzeFIATA kana yeIATA cargo vamiririri.
Ndinoita sei kubhadhara kune yekutakura zvinhu kambani inogara muChina?
Mumwe anogona kushandisa nzira dzekuchinjisa mari kubhadhara kune iyoyo kambani kubhengi account muChina.
Mazhinji emakambani ekufambisa aya ekutakura zvinhu achave aine maakaundi nemabhangi anotungamira akaita seHSBC (Hong Kong neShanghai Banking Corporation).
Iyo inotakura mafambiro mberi inogona nyore uye nekukurumidza kugamuchira chero kubhadhara.
Ini handina Bhiri rekutungamira (B / L), chii chandinofanira kuita?
Unogona kuzivisa nhamba yekutarisira kutakura zvinhu munzvimbo ye "Bhiri reKutungamira (B / L) nhamba muchikumbiro chako chemvumo.
Ndokunge, kana iwe usina kupihwa Bhiri rekutungamira.
Iwe unogona kuvandudza ruzivo kana iwe uchinge watora Bhiri rekutungamira nekungotumira application yakagadziridzwa.
Ndino vimbisa sei kuchengetedzwa kwekutakura kwangu kubva kuChina?
Kuhaya nyanzvi uye neruzivo rwekutakudza mitoro mberi ndiyo mhinduro chete pano.
Ivo vachabata maitiro ese, kungave kuri kurodha, kunyorera, kufambisa kana kujekesa.
Vafambisi vekutakura vakadaro vanoziva mitemo nemirau inotonga kuunza kubva kuChina kuenda kuCzech
Muchokwadi, kubhadhara nyanzvi yekutakura zvinhu kuchakutumira iwe mari nenguva.
Iwe unogona kutibata nesu chero nzira th24 / 7 kuburikidza nefeksi kana email. Iwe unogona kushanyira hofisi yedu pachako.
Wedzera: Chikamu A3 2F LianFa Chivakwa No.199 Dongxin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215124, China